NY BAIBOLY MOMBA NY FIKAMBANANA | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly NY BAIBOLY IZAO DIA MOMBA NY FIKAMBANANA
NY BAIBOLY IZAO DIA MOMBA NY FIKAMBANANA
Androany isika dia hirotsaka ao amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly momba ny alahelo. Na manao ahoana na manao ahoana ny fiainana tsara itondrana antsika rehetra, dia mbola hisy ny fotoanantsika hitomaniana, hitondra alahelo tsy takatry ny saina noho ny fahaverezan'ny olona sahy ao am-pontsika. Ny fanaintainana dia mahatonga antsika hanana alahelo tsy voatanisa hatrizay. Mandritra izany fotoana izany dia ny lehilahy ihany dia afaka manandrana mampionona antsika amin'ny fanaovana teny maneho hatsarana. Na izany aza, ireo teny ireo dia tsy basy mahafatifaty amin'ny fahatapahan'ny ao anaty antsika.
Andriamanitra ihany no afaka manasitrana ny alahelontsika. Andriamanitra irery no afaka mamela antsika hanadino ireo fanaintainana tsikelikely. Joba dia lehilahy nanan-karena talohan'ny nanombohan'ny devoly an'Andriamanitra mba hanomezany azy hiditra haka fanahy an'i Joba. Nanamafy ny devoly fa noho i Joba dia lehilahy nahomby; izany no antony anompoany an-pahazotoana an'Andriamanitra. Rehefa namela ny devoly hanana ny lalany Andriamanitra, dia namoy ny zava-drehetra i Joba afa-tsy ny ainy. Very ny fananany sy ny zanany ary ny asany rehetra izy, ary ny aretina mahafaty iray dia tena nandrahona ny ainy mihitsy aza.
Nandritra ireo fotoana nampahory an'i Joba ireo, ny namana sy ny fianakaviana dia nampionona azy tamin'ny teny nanandrana nanome fanantenana azy fa tsy kivy amin'ny fiainana. Nandritra izany fotoana izany, ny vadiny, rehefa avy nahita ny vadiny tamin-kateza mahatsiravina toy izany dia sahy nanala an Andriamanitra ka ho faty hamarana ny fanaintainana fa tsy handalo olana be. Tahaka ny niainan'i Joba tao anatin'ny fotoan'ny alahelo azy manokana ihany koa isika amin'ny fiainantsika manokana dia hanjary ho zahana isika, hiaina ny fanaintainan'ny fahaverezan'ny olona manan-danja amin'ny fiainantsika, dia ho fantatsika hoe Andriamanitra irery izany afaka manaisotra ny fanaintainantsika.
Ao amin'ity lahatsoratra ity dia nanangona lisitr'ireo andininy ao amin'ny Baiboly isika momba ny alahelo mba hanomezana fanantenana antsika rehefa ao anatin'ny tafio-drivotra mahatsiravina isika. Ireo andininy ireo dia hitondra fahatsiarovan-tena fa tsy irery isika ao anatin'izany olana izany. Matetika, isaky ny misedra fiainana isika dia miharatsy ny fanaintainana ary manajamba ny fahatsapan-tenantsika mba hahafantarantsika fa tsy irery isika fa Andriamanitra dia momba antsika. Vakio ireo andinin-tsoratra masina manaraka ireto mandra-pahitanao hery mandritra io fotoana fangirifiriana io.
Isaia 43: 2 Raha mandalo ny rano ianao, dia homba anao aho; ary hamaky ny ony dia tsy hanafotra anao izy: raha mandalo amin'ny afo ianao, dia tsy ho may; ary tsy hirehitra aminao ny lelafo.
Salamo 31:24 Mahereza, dia hamafiso ny fonao Izy, dia ianareo rehetra izay manantena an'i Jehovah.
Rômanina 8:18 Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy azo ampitahaina amin'ny voninahitra izay haseho ato amintsika.
Salamo 147: 3 Manasitrana ny torotoro fo Izy Sy mamehy ny feriny.
Salamo 34:18 - Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah; ary mamonjy ireo toy ny fanahy manenina.
1 Petera 4: 12-19 - Ry malala, aza atao mahagaga ny amin'ny fizahan-toetra ny afo, izay fizahan-toetra anao, toy ny misy zavatra hafahafa tonga aminao.
Jôba 16: 5 Fa hampahery anao amin'ny vavako aho ary hampitony ny alahelonao ny fitobian'ny molotro.
Joba 6:10 Dia mbola mahazo aina ihany aho; eny, hamafiako am-pahoriana aho, fa aza avela; fa tsy nanafina ny tenin'ny Iray Masina aho.
1 Piera 5: 9-10, tohero izy, miorena tsara amin'ny finoanao, satria fantatrao fa mitovy amin'ny fijalian'ny rahalahinao eran'izao tontolo izao ilay fijaliana mitovy aminy. Ary rehefa avy nijaly vetivety ianareo, dia Ilay Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, Izay niantso anao ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy, dia izy mihitsy no hamerina, hanamafy, hampahery, ary hampiorina anao.
Filipiana 4: 6-7 - Aza mitandrina na inona na inona; fa amin'ny zavatra rehetra dia ampahafantaro an'Andriamanitra ny fangatahanareo amin'ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana.
Salamo 91: 1-16 - Izay mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny Avo Indrindra Dia mitoetra eo ambanin'ny aloky ny Tsitoha.
Isaia 53: 4 efa nitondra ny alahelontsika tokoa Izy ary nivesatra ny fahoriantsika: nefa ataontsika ho nokapohina sy nokapohin'Andriamanitra ary ory izy.
2 Kôrintianina 1: 3-8 - Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny famindram-po sy Andriamanitry ny fampiononana rehetra.
Salamo 18: 2 Jehovah no vatolampiko sy fiarovana mafy sy mpamonjy ahy, Andriamanitro, vatolampy ialofako, ampingako ary tandroky ny famonjena ahy, fiarovana mafy ho ahy.
1 Kôrintianina 14:33 - Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana, fa an'ny fiadanana, toy ny any amin'ny fiangonan'ny olona masina rehetra.
1 Petera 3:18 - Fa Kristy koa dia nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina ho an'ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo, fa novelomin'ny Fanahy.
Jeremia 17:14 Sitrako, Tompo ô, dia ho sitrana aho; vonjeo aho, dia ho voavonjy, fa ianao no hoderaiko
Salamo 31: 9 Mamindrà fo amiko, Jehovah ô, fa azom-pahoriana aho, ary malahelo ny alaheloko, eny, ny fanahiko sy ny kiboko.
1 Kôrintianina 10:13 Tsy nisy fakam-panahy nahazo anao, izay tsy mahazatra ny olona. Mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anao halaim-panahy mihoatra noho ny fahaizanao, fa miaraka amin'ny fakam-panahy dia hanome lalana ho an'ny fandosirana ihany koa izy, mba hahafahanao miaritra
Jôba 6: 2 Enga anie ka efa voalanja mafy ny alaheloko, ary efa tafapetraka tamin'ny mizana ny fahoriako!
Jeremia 10:19 Lozako amin'ny loza manjo ahy! mampahory ny feriko; fa hoy izaho: Fahoriako izao, fa tsy maintsy miaritra aho.
2 Kôrintianina 2: 5 Ary raha nisy nampalahelo, dia tsy nampalahelo ahy izany, fa tamin'ny ampahany, mba tsy halahelo anareo rehetra aho.
Hebrio 13:17 Ankatoavy izay manapaka anareo, ka manoa tena, fa miambina ny fanahinareo izy, tahaka izay tokony hampamoahina, mba hanaovany izany amin'ny fifaliana, fa tsy amin'ny alahelo; fa tsy mahasoa anareo izany. .
Previous lahatsoratraNY BAIBOLY dia manonta momba ny zavamananaina
Next lahatsoratraMITADY NY TENANO NY BAIBOLY
40 Mfm vavaka manasongadina fitomboana ara-panahy